हिंसामुक्त समाज निर्माणको आधार- विचार - कान्तिपुर समाचार
लैंगिक नीतिहरू स्वार्थप्रेरित झुन्ड र बिनाबर्दीका विज्ञहरू नीतिगत तहमा हावी हुनबाट रोकी विषयविज्ञहरूको परामर्श लिएर मात्र बनाउनुपर्छ ।
फाल्गुन ३, २०७७ सम्झना शर्मा
उल्लिखित कार्य दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक पनि हुनेछ । त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूले लोकतान्त्रिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न विभिन्न धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र शोषण अन्त्य गरिने भनिएको छ ।
तर, बढ्दो लैंगिक हिंसा र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध अनि पीडितको न्यायप्राप्तिको कहालीलाग्दो लडाइँ हेर्दा संविधान र ऐनप्रदत्त अधिकारहरू अझै अभ्यासमा आइसकेका छैनन् । समायअनुसार नीति नियमहरूका अक्षरहरू परिवर्तन भइरहे पनि मानिसको व्यवहार र सोच यथावत् रहनु दुःखद पक्ष हो । उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीलगायत अन्य व्यक्तित्वलाई समेत महिला भएकै कारण अनेक आरोप लगाउने र उनीहरूप्रति कुदृष्टि र कुविचार राख्ने, पदीय हैसियत, मर्यादा, योग्यता र क्षमतालाई कम आकलन गर्ने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्न हिच्किचाउनेलगायतका काम पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । यसले अझै कार्यक्षेत्र स्वस्थ र लैंगिकमैत्री बन्न दिइरहेको छैन । कार्यस्थलहरूमा लैंगिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी लैंगिक नीति बनाउनुपर्दा नेतृत्वलाई खलखली पसिना आउँछ । कुसंस्कारको जरो उखेल्न नसक्दा महिला र पुरुषका सामाजिक भूमिकाहरू अझै बदलिएका छैनन् ।
मासिक रक्तस्राव, गर्भवती, सुत्केरी, गर्भपतनजस्ता महिलासँग सरोकार भएका विषय सम्बोधन गर्ने नीतिहरूसमेत पुरुषसँग तुलना गरी बनाइनुले पितृसत्तात्मक सोच नीतिगत तहमै हावी छ भन्ने देखाउँछ । पुरुषहरूकै अग्रसरतामा बनाइने यस्ता लैंगिक नीतिहरू देखाउनका लागि उपयुक्त होलान् तर व्यावहारिक हुनै सक्दैनन् । लैंगिक नीतिहरू स्वार्थप्रेरित झुन्ड र बिनाबर्दीका विज्ञहरू नीतिगत तहमा हावी हुनबाट रोकी विषयविज्ञहरूको परामर्श लिएर मात्र बनाउनुपर्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा महिला तथा बालिकाहरू बलात्कार, यौनजन्य र घरेलु हिंसामा परेका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढिरहेको छ । महिला र बालिकाको सुरक्षा चुनौती दिनानुदिन बढिरहेको छ । आमा, छोरी, बहिनी, दिदी, बुहारी, भाउजू सुरक्षित हुन नसक्नुले समाज कति डरलाग्दो भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । के प्रजनन अंग भएकै कारण महिला असुरक्षित हुनुले समाजको निर्दयी पाटोलाई उजागर गर्छ ? बालिका भएकै कारण जन्मिन नपाउनु, जन्मिएपछि पनि हेला सहेर हुर्कनु र हुर्किएपछि पनि केवल प्रजनन अंगकै कारण असुरक्षित भएर बाँच्नु यो देशका महिलाको नियति बनिसक्यो । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेपट्टि राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । यस्तो स्थितिलाई सुधार्न चाहने हो भने परिवर्तन असम्भव छैन ।
बलात्कारपछि जीवनभर जिउँदो लास बन्नुपर्ने अवस्था छ । क्षतविक्षत प्रजनन अंगको उपचारको चुनौती, पाठेघर च्यातिने, फुट्ने अनि आजीवन प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थाले जिउँदो रहे पनि मरेतुल्य बनाइरहन्छ । जीवनको हरेक पलमा आफ्नो विवाह नहुने, बच्चा नजन्मने र समाजले नराम्रो ट्याग लगाइरहने आदि कारणबाट मानसिक स्वास्थ्य कमजोर त हुन्छ नै, यसबाहेक सामाजिक अपहेलना, लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने पनि हुन्छ । त्यसैले बलात्कार र यौन हिंसापीडित बालिका, महिला वा अन्यलाई राज्यको विशेष र उचित संरक्षणको खाँचो पर्छ । पीडितहरूको संरक्षण हुन सकेन भने न्याय प्राप्तिका दौरान उनीहरूले हैरानी र थकान महसुस गर्छन् । यसले उनीहरूमा राज्यका निकायहरूप्रति अविश्वास बढ्न थाल्छ र दण्डविहीनताले प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले स्वास्थ्य परीक्षण र घटनास्थलमा भएका प्रमाणहरूको सुरक्षा, साक्षीको संरक्षण, पीडितलाई तत्काल राहत र सुरक्षामा राज्यको पहिले ध्यान पुग्नुपर्छ । यो दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्दैन ।
यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गरी दोषीलाई पहिचान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । र, उसले तदारुकताका साथ घटनाको अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्छ । कुनै किसिमको आस, त्रास, दबाब र प्रभावमा परेर अनुसन्धानलाई फितलो बनाउनु हुन्न । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत यस्ता घटनाको अनुगमन गरी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । पीडितको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका राज्यका निकायहरू र सरकारप्रतिको आस्था, भरोसा र विश्वास डगमगाउन दिनु हुन्न । राज्यले असल अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ, यसो हुन सकेमा पीडितहरूलाई ‘होस्टाइल’ हुनबाट जोगाउन र सत्य तथ्य पहिचान भई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।
पीडितको संरक्षण गर्ने यस्ता संयन्त्रहरू तीनै तहका सरकारी निकायहरूमा अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशले केही ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरूबीच एक चरणको छलफलमा ल्याइसकेको छ । यस्ता प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । बलात्कारीले कानुनबमोजिम पाउने सजायहरूलाई पनि कोभिड–१९ का बारे टेलिफोनमार्फत प्रसारण भइरहेको विज्ञापनजसरी व्यापक रूपमा प्रचार गर्न सकिए आगामी दिनमा अपराधीहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्थ्यो कि ! हाम्रा छोरीहरू निर्बाध विद्यालय जान, परिवारमा रम्न र खुलेर हिँडडुल गर्न सक्ने वातावरण बन्थ्यो कि !
विद्यालयका पाठ्यक्रमहरूमा समेत सामाजिक अपराध, दण्ड, सजाय र बलात्कारका असर र परिणामबारे शिक्षा दिने गरी विषयवस्तुहरू समावेश गर्न आवश्यक पहल गरिनुपर्छ । अभिभावकलाई बालबालिकाको उचित हेरचाह, उमेरमा आउने परिवर्तन, उनीहरूका व्यवहार र क्रियाकलापहरू आदिबारे परामर्श र शिक्षा दिने खालका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले यस विषयमा आफ्ना कार्यक्रमहरू तय गरी सुरक्षा निकाय र सरकारसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बालसुधारगृहहरूमा राखिएका बालकहरू अधिकांश जबरजस्ती करणी अपराधमा संलग्न रहेका र पटके अपराधीसमेत भएको विभिन्न अध्ययनबाट पाइएकाले यस्ता बालकहरूलाई समेत सचेतनाको खाँचो देखिन्छ । यसका साथै जबरजस्ती करणी किन भइराखेको छ भन्नेबारे पीडकको मनोविज्ञानको अध्ययन र खोज पत्रकारितामार्फत सही सत्य र यथार्थ सूचना र तथ्यांकहरूको खोजीका लागि यस क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा अध्ययन र अनुसन्धानहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । कारागार र हिरासत कक्षहरूको नियमित अनुगमन गरी सुधारका प्रयत्न हुनुपर्छ ।
पछिल्ला दिनमा धेरै जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाको शैक्षिक स्तर सुधार हुँदै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कतिपय विद्यालय र कलेजहरूमा महिला तथा बालबालिकाको भर्ना संख्या वृद्धि, परीक्षाका नतिजाहरूमा पनि छात्राहरू प्रथम तथा द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल बन्नुले भविष्यको शुभसंकेत नभएका भने होइनन् । जबसम्म राज्य संरचनाका सबै तह र तप्काहरूमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति र सशक्त आवाज हुन सक्दैन तबसम्म पुरुषप्रधान समाज र पितृसत्ताको वर्चस्व कायमै रहिरहन्छ । त्यसैले शैक्षिक सुधारमार्फत लैंगिक समानताका अभियानहरू सञ्चालन गर्नु आजको माग हो । सचेत नागरिकले आफू, परिवार, कार्यस्थल, समाज र राष्ट्रलाई सम्मान गर्न सक्छन् र समाजमा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका वाहक बन्नेछन् ।
तसर्थ आगामी दिनमा बालिका शिक्षा र उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गरेर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । तीनै तहका सरकारले यो विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम गर्न सके अबको दस वर्षभित्रै राज्यका सबै संरचना र नीति निर्माणतहमा महिलाको उपस्थिति मजबुत हुनेछ । हरेक निकायका प्रमुख पद र नेतृत्वमा महिलाहरूको सहभागिता अभिवृद्धि हुनेछ । त्यस्तै, बालिका र महिलाका वास्तविक आवश्यकताअनुरूपका नीति र नियमहरू बन्न सहज हुनेछ । त्यसैले आजै लैंगिकमैत्री संरचना निर्माण र विकासमा राज्यका सन्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
(शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हुन् ।)
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ ०८:०४